Mitsinjaka Sady Faly I Koety · Global Voices teny Malagasy
Mitsinjaka Sady Faly I Koety
Voadika ny 09 Marsa 2014 14:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Swahili, Português, Español, русский, English
Ravo i Koety fa manana ny kinovany azy manokana amin'ilay hira an-dahatsary “Happy” an'i Pharrell. Ny lahatsary eto ambany, izay manasongadina ny fandraisana anjaran'ireo olom-pirenena sy mponina maherin'ny 150, dia hevitra avy amin'ny tale Taibah AlQatami ary novokarin'ilay mpilalao horonantsarimihetsika Mohammed Al Saeed.
Araka ny filazan'ny @Loft965:
Ny fikasana dia ny hanavao ilay hira “Happy” an'i Pharrell anaty hafatra mahomby hoan'ny faritra amin'ny alalan'ny fangalàna horonantsary aminà toerana voafaritra ao an-tanàna ary koa ny hampidirana indray ny t-shirt “Afaho I Koety” izay notafiana nandritra ny Adin'ny Helondrano tamin'ny vahoaka nitaky ny fahafahan'ny fireneny. Ireo tanora ankehitriny no manohy ny hetsi-pahafahana amin'ny fanaparihana zavatra tsara sy fankalazàna ny fahalalaham-pitenenana.
Noafahan'ny mandatehezana notarihin'i Etazonia i Koety tamin'ny Febroary 1991, taorian'ny fananiham-bohitra Irakiana naharitra valo volana.
Tao amin'ny Twitter, Nasser AlQatami nanamarika hoe:
Olona 54000 no nijery ary mbola mitohy ny fanisana! Andeha hotohizana handroso! Tsindrio ny: http://t.co/IgGFm8IMVc. #HappyQ8
Huda Aldakheel kosa nilaza hoe:
Mandihy miaraka amin'ilay lahatsary mandritra ny alina ny #HappyQ8. Misaotra anao, mahavariana @Nasque; Huda Saleh Aldakheel (@ HudaSSD) 7 Marsa 2014